Fanabeazana mampiaty : ankizy sy tanora manana fahasembanana maherin’ny 1.200 no hampidirina an-tsekoly hatramin’ny 2023. – Depeche TARATRA
Accueil/Social/Fanabeazana mampiaty : ankizy sy tanora manana fahasembanana maherin’ny 1.200 no hampidirina an-tsekoly hatramin’ny 2023.
Manohisoa Rasolofoarijaona 22 octobre 2021
Anisan’ny vato misakana tsy ahafahan’ny ankizy manana fahasembanana miditra an-tsekoly ny fiheverana raiki-tapisaka eo amin’ireo raiamandreny.
Maro no tsy mbola resy lahatra fa afaka miditra an-tsekoky sy misitraka fanabeazana ny zanany na manana fahasembanana aza, hoy Rakoto Joseph Noroniaina, lehiben’ny “tetikasa mahay-fanabeazana mampiaty FJKM”. Olana misakana izay fampiatina eo amin’ny tontolon’ny fampianarana izay koa ny tsy fahampian’ny fotodrafitrasa manaja ny zon’ireo ankizy manana fahasembanana, na misy ihany fa tsy maharaka ny filana sy ny hamaroan’ireo sokajin’ankizy mila fandraisana manokana. Manoloana ny fahasarotana sedrain’ny ankizy manana fahasembanana, manamafy ny fanentanana sy fampahafantarana ny tontolon’ny fanabeazana mampiaty ny “tetikasa mahay” tohanan’ny CBM Global (Christoffel Blindenmission).
Eo ny fanofanana ireo mpampianatra amin’ny sekoly mampiaty. Hatevenina koa ny fanentanana ny raiamandreny hampiditra an-tsekoky ny zazany manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, ara-pahitana na eo amin’ny fandrenesana.
Sekoly 76 amin’ny faritra 4 (Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana, Alaotra Mangoro) no miara-miasa amin’ny “tetikasa mahay”.
Tanjona hatramin’ny taona 2023 ny hampiditra an-tsekoly ankizy sy tanora maherin’ny 1.200, hanofana mpampianatra 480 sy mpiandraikitra sekoly 60, ao anatin’ny tapany farahoa amin’ny tetikasa Ankoatra izay, sekoly 60 vaovao no kendrena ho afaka handray ankizy manana fahasembanana, amin’ny alalan’ny fanofanana mpampianatra sy famatsiana fitaovana pedagojika na fanatsarana tranon-tsekoly.
Ifantohan’ny “tetikasa mahay- fanabeazana mampiaty” ny fanaovana adisisika amin’ireo mpanapa-kevitra isan’ambaratonga eto amin’ny firenena. Kendrena ny hahazoana taha 75% amin’ny fiovam-pitondratena sy fandraisan’andraikitr’ireo mpisehatra rehetra eny amin’ny fiarahamonina hoy Rakotomiaranjato Manitra Lovasoa, mpanatanteraka ny tetikasa.
Mpanao gazety 15 avy amin’ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra no nomen’ny tetikasa fiofanana momba ny fanabeazana mampiaty tao Antsirabe androany, taorian’ny fitsidihana sekoly mampiaty tany Faratsiho. Tanjona ny hampirisihana ny fiarahamonina hiditra amin’ny tontolo mampiaty, ho fitsinjovana ny ankizy manana fahasembanana eo amin’ny lafiny fanabeazana.
Commune Ambatolampy Tsimahafotsy: reception d’équipements sanitaires
Fin de grève à la poste Malagasy : les services reprennent
Ndao hamaky boky Vohémar : ny EPP Andranomasibe no natao sekoly filamatra
Fandraisana an-tanana ny mararin’ny Alzheimer : manao antso avo ny fikambanana Masoandro Mody
Gouvernance environnementale : renforcement de capacités de tous les acteurs
RN2 : mahatratra 50 sentimetatra ny halalin’ny lavaka
Fahazoa-mamantatra ny raharaham-panjakana : ny finiavana politika no tsy ampy
Ankizy maherin’ny 400 no hisitraka ny Epp manarapenitra ao Morafeno